कुन–कुन एमाले नेताहरुले गर्दैछन् पीएचडी ? « Pahilo News
कुन–कुन एमाले नेताहरुले गर्दैछन् पीएचडी ?
प्रकाशित मिति : 27 October, 2016 3:11 pm
११ कात्तिक । नेकपा (एमाले) मा विद्यावारिधी गर्ने केन्द्रीय तहका नेताहरु विस्तारै बढ्दै छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो ठूलो दलसमेत रहेको एमालेको १ सय ६२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेसम्म जम्मा ५ जनाले मात्रै विद्यावारिधी गरेका छन् । तर, अब भने त्यो संख्या बढ्ने भएको छ । केन्द्रीय तहका अरु नेताहरुले पनि अहिले धमाधम विद्यावारिधी गर्दैछन् ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनअघि डा. विजय पौडेल, डा. राजन भट्टराई र डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फले मात्र विद्यावारिधी गरेका थिए । नामको अगाडि डा. लेखे पनि अर्का केन्द्रीय नेता वंशीधर मिश्र भने मेडिकल डाक्टर हुन् । तर, नवौं महाधिवेशनलगत्तै अर्का केन्द्रीय नेता गंगालाल तुलाधरले पनि विद्यावारिधी गरे । साथै, विजय सुब्बाले पनि विद्यावारिधी गरे । उनीहरुसमेत एमाले केन्द्रीय कमिटीमा विद्यावारिधी गर्ने नेताको संख्या पाँच पुगेको हो ।
को–को छन् पीएचडीको तयारीमा ?
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, पोलिट्व्युरो सदस्यहरु वेदुराम भुसाल, बिन्दा पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ पनि अहिले विद्यावारिधीको तयारीमा जुटेका छन् । त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले पनि विद्यावारिधी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहका सर्वोत्कृष्ट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ‘स्टेट भ्वायलेन्स एन्ड द माओस्ट इन्सर्जेन्सी इन नेपाल’ शीर्षकमा पिएचडी गरिरहेका छन् । नेपालको माओवादी हिंसालाई गहिरोसँग बुझेका रावलले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेर समेत काम गरिसकेका छन् । रावलले सुरुमा नेपालको हिंसा, राज्य र माओवादी विद्रोहको बारेमा पुस्तक लेख्ने सोच बनाएका थिए । ‘पछि केही साथीहरुले यो राम्रो शोध हुन्छ’ भनेर पिएचडी गर्न नै सल्लाह दिएपछि पिएचडीतर्फ लागेको उनले बताए ।
अर्घाखाँचीको एउटा विद्यालयमा कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेर पछि ‘प्राइभेट’ परीक्षा दिँदै उच्च शिक्षा हासिल गरेका भुसाल ‘जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रम’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् । करिब १३ वर्ष जेल जीवन बिताएका भुसालले एसएलसीदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको परीक्षा जेलबाटै दिएका थिए । पञ्चायती कालको चर्चित वर्रे काण्ड घटेपछि २०३० सालमा जेल परेका भुसाल ०४३ सालमा जेलमुक्त भए । उनी जेलमुक्त हुँदा स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थी थिए । इतिहास र संस्कृतिमा स्नातकोत्तर गरेका भुसाल भन्छन्– ‘भूमिगत हुँदा र जेल जीवनमा पनि मैले अध्ययनलाई निरन्तरता दिएँ ।’ विद्यावारिधिका लागि पहिलो मस्यौदाको अन्तिम तयारीमा रहेका भुसालले छिट्टै पूरा गर्ने जानकारी दिए ।
वनस्पतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी एमाले नेतृ पाण्डे एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पहिलो विद्यावारिधि गर्ने महिला बन्दैछिन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट ‘नीति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिता’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेकी पाण्डे पूर्वसभासद् समेत हुन् । टे«ड युनियनको क्षेत्रमा निकै ज्ञान हासिल गरेकी पाण्डे एमालेभित्र अध्ययनशील नेतृका रुपमा पनि परिचित छिन् । थाइल्याण्डको बैंककबाट समेत स्नातकोत्तर गरेकी पाण्डे भूमिगत कालमा पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिएको बताउँछिन् । ‘कम्युनिष्टहरुले औपचारिक शिक्षा लिनु हुँदैन भन्ने चलन थियो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘मैले भागेर पढेकी हुँ, कति ठाउँमा त अध्ययन गर्छु भनेर विद्रोह पनि गर्नुपर्यो ।’ सन् २०१७ मै विद्यावारिधी पूरा गर्ने तयारीमा रहेकी पाण्डे राजनीति गर्नेहरुमा अध्ययन अनिवार्य भएको बताउँछिन् ।
एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य शेरबहादुर तामाङ र केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेल पनि विद्यावारिधीको तयारीमा छन् । तामाङले ‘द रोल अफ सोसियो कल्चर भ्यालु एण्ड नम्स इनदी स्टेट नेशन अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर’ विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन् । ढुंगेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी शिक्षाको प्रारुप’ विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन् । तीन वर्षसम्ममा विद्यावारिधी पूरा गर्ने उनको तयारी छ । ‘म अहिले विद्यावारिधीको विद्यार्थी हुँ,’ उनले भने ।
क–कसले गरे पीएचडी ?
यसैगरी, प्रगतिशील साहित्यकार एवं पूर्व शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितका छोरो डा. विजय पौडेलले ‘नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सवादी अर्थशास्त्र’ विषयमा विद्यावारिधी गरेका हुन् । पौडेल पूर्वसभासद् पनि हुन् । अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका पौडेल माक्र्सवादी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्ने पहिलो नेपाली हुन् ।
त्यसैगरी पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेको तुलाधरले विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेका हुन् । उनले जापानको यहिमे विश्वविद्यालयबाट सन् २०१५ मा विद्यावारिधी गरेका हुन् । तुलाधर एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य हुन् । सासंद् समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य भट्टराई पनि एमालेका विद्यावारिधीवाला नेता हुन् । उनले सन् २०११ मा भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधी गरेका हुन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले लण्डनबाट स्नातकोत्तर गरेका हुन् । यसैगरी, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले पनि पीएचडी गरेका छन् ।
यसैगरी, एमाले निकट दर्जनौं बुद्धिजीविहरुले पनि पीएचडी गरेका छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं एमाले बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. गोविन्दबहादुर थापा, डा. डिल्लीराज खनाललगायतले पनि पीएचडी गरेका छन् ।